Man United Oo Guul Weyn Ugu Soo Laabatay Wadada Saxda Ah Kadib Markii Ay Garaaceen Newcastle | Somalia News
Go’aankii Maamul Gobolleedyada Farmaajo Hordhigeen uu kashifay lafta garen
Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Madaxweynaha Dowlada Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-Gareen ayaa maanta furay Kal-Fadhiga labaad ee Golaha Wakiilada Koonfur Galbeed isagoo khudbadiisa furitaanka kaga hadlay dhinacyo kala duwan iyo Waxyaabaha uqabsoomay mudada Sanadka iyo Bilooyinka ah Ugu horayn Madaxweynaha ayaa Xildhibaanada uga warbixiyay Xaalada Koonfur Galbeed iyo Dadaalada lagu Bixinayo sidii looga miradhali lahaa Fulinta Himilooyinka Shacabka Waxaana uu Xusay Madaxweynaha Guulaha Laga Gaaray Amniga,Xureynta Degmooyinka,Tayanta iyo Tawabarida Ciidanka,Fulinta Howlgalada Qorshaysan ee lagu Dhibaataynayo Argigixisada Alshabaab iyo Udiyaar garowga Furida Wadooyinka, Madaxweynaha ayaa sidoo kale Xildhibaanada Warbixin ka siiyey Dib-udhiska Magaalooyinka Hirgelinta Mashariic kala Duwan sida Biyooley,Bahnaano,GPLG iyo kuwo kale kuwaasi oo Laga fulinayo guud ahaan Gobolada Baay,Bakool iyo Shabeelaha Hoose Madaxweynaha Dowlada Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa sheegay in Safaradii uu ku tagay Degmooyinka Koonfur Galbeed ay ahaayeen kuwo uu ugu kuuragalayey Xaaladaha Degmooyinka Waxaana uu xusay in lagu guulaystay in Degmooyinka laga fuliyo Mashariic kala Duwan oo Bulshada Muhiim uah Sida Waxbarashada,Cafimaadka,Dib udhiska Xarumaha Dowlada IWM sidoo kale Madaxweynaha ayaa Xusay in lagu guulaystay in la hormariyo Dhaqaalaha Koonfur Galbeed lagana Dareemayo Isbedel Hormarineed Madaxweynaha ayaa sheegay in Arimaha Doorashooyinka heer Federaal laga gaaray heshiis dhab ah kaas oo dhabaha u xaaraya sidii dalka uu ugu jihaysan lahaa Doorashooyinka 2020/2021 taas oo ah wado aan la dhaafi Karin oo Sal iyo Tariikh lagu yaqaano ah Dowladnimadeena in afartii sanaba hal mar ay dhacdo Doorasho dalka u jihaysa wadada Hormarka. Ugu danbayntii Madaxweynaha ayaa uga mahad celiyay Golaha Wakiilada Koonfur Galbeed shaqooyinka waxtarka leh ee ay hayaan isagoo si rasmi ah u furay Kal-fadhiga Labaad ee Golaha Wakiilada Koonfur galbeed. Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp
Drs. Ruqiya: “Madax qowlkooda & ficilkoodu isla socdaan ayaan u baahan-nahay”
- Advertisement - Drs. Ruqiyo Sheekh Naaji oo ah musharax xildhibaan ka tirsan BF Soomaaliya, ayaa ugu baaqday guud ahaan ururada bulshada, gaar ahaan saxaafadda in ay qaadato door ay mas’uuliyadi ku dheehan tahay xilliga lagu jiro diyaar-garowga doorashada si baarlamaanka cusub ay u soo galaan shaqsiyaad dalkan la-xajecli ay ka hayso, dalkana u jiheyn kara dowladnimo cadaalad ku dhisan. “Qof kasta ee Soomaali ah ee maanta fursad u heli kara inuu wax saxo, ama saamayntiisa u adeegsado sidii dowladnimo taam ah dalka u gaari lahaa, kaalintiisa waa loo baahan yahay” Ayeey tiri Drs. Ruqiya oo saxaafadda la hadashay maanta, waxaynta ugu baaqday warbaahinta Soomaalida in ay noqoto warshad turxan bixisa, soona saarta dad baarlamaanka Soomaaliya u qalma. “Saxaafaddu ma ahan tan wax dooranaysa waxayse leedahay awood ay ku soo gole-joojin karto mas’uul walba oo quud-daraynaya inuu xil qabto, tusaale; Aniga waxaan la tartamayaa xildhibaanka deegaankayga ku matalaya baarlamaanka, waxaan rabi lahaa inaan la doodo, la xisaatamo, dadkii aan metalayno marka ay doodeena dhagaystaan oo ay si cadaalad ah u qiimeeyaan ay taageeraan midkii uu calaf u galo” Ayeey tiri Ruqiya, iyada oo hoosta ka xariiqday in aysan mansab iyo magac doon ahayn ee ay tahay qof u soo baxday laxa-jecli iyo damqasho ay dalkeeda iyo dadkeeda u qabto. “Maadaama aysan shacabku wax soo dooranayn, oo cidda wax dooranaysa ay tahay baarlamaanka, waxaa laga maarmaan ah dadka baarlamaanka soo galaya in ay noqdaan kuwa lagu aamini karo masiirka ummadda” Ayeey tiri Ruqiya, waxay ku boorisay ururada bulshada in ay soo ceshtaan kaalintooda. “Ururadu bulshadu waxay matalaan, kuna hadlaan codka bulshada qaybaheeda kala duwan, waxay soo bandhigaan baahida & duruufaha adag ee shacabku ku sugan yihiin, shaqsiyaadka madaxda ka ah ururada bulshada waxaa xaq loogu leeyahay in aysan noqon kuwa lagu shubto, ee ay noqdaan kuwa bulshada ay metalaan ku hogaamiya cadaalad, uguna baaqaan bulshadu in ay isugu baxaan dareenkood Drs. Ruqiya Sheekh Naaji waxay sheegtay inay ka mid tahay shaqsiyaadka u ololeynaya musharax Madaxwayne Sheekh Shariif Sheekh Axmed, sababaha ay u taageerayso na aysan ahayn wax kale, ee ay u aragto inuu yahay mas’uulkii Soomaaliya gaarsiin lahaa halka ay mudan tahay. “Sheekh Shariif wuxuu fure u ahaa guulo badan oo ay ummadda Soomaaliyeed muddo ku naaloonaysay, laga soo billaabo markii uu ahaa guddoomiyihii golihii maxaakiimta, markii uu noqday Madaxwayne wuxuu ku guulaystay inuu soo nooleeyo rajadii dowladnimada dalka” Ayeey tiri Drs. Ruqiya. Drs. Ruqiya, waxaa kale oo ay sheegtay in Soomaaliya ay ka soo kabanaysa burbur ay ku jirtay ku dhowaad 30 sanno, sida keliya ee ay u soo kaban karto in ay tahay in awoodu aysan noqon mid koox keligeed ay ku amar ku taaglayso, ee sharcigu noqdo mid qof kasta ba ka sareeya. “Fikirka ah, in talada iyo masiirka ummadda ay isku koobaan hal koox, oo keligood isu arka in ay dadka kale ka Soomaalisan yihiin waa fikir aan Soomaali geyn, Soomaaliya waxay marxalada maanta lagu jiro kaga bixi kartaa in dadka shaqada loo dhiibayo aan loo eegin ma aniguu i taageersan yahay, ee lagu qiimeeyo in qofkaasi uu shaqada ka soo bixi karo” Ayeey tiri Drs. Ruqiya, waxayna intaasi raacisay: “Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu badan ee na haysta haddaan Soomaali nahay waxay tahay in shacabku ogaadaan in ay iyagu yihiin dowladda dhabta ah, ee shaqsiyaadka xilalka loo doorta ay yihiin dad shaqo loo dirsaday, haddii ay ka soo bixi waayaan waajibaadka loo igmadayna ay shacabka inta isu soo baxaan si wadajir ah ay u diidi karaan, waxaan u baahanahay madax qowlkooda iyo ficilkooda ay isla socdaan, ma doonayno madax marka hore been inoo sheegta marka ay Villa Somalia fadhiistaanna balantii ay shacabka ka qaadeen ku balan fura”. Xafiiska Shabakada Allbanaadir.comMuqdisho [email protected] - Advertisement -
Man United Oo Guul Weyn Ugu Soo Laabatay Wadada Saxda Ah Kadib Markii Ay Garaaceen Newcastle
Kooxda Man United ayaa guul Weyn ah ka gaadhay kooxda Newcastle United iyaga oo ku soo laabtay wadada saxda ah kadib ceebtii Tottenham.
Kulanka ayaa ahaa mid ay United ka muuqatay cabsi iyo waliba is ilaalin gaar ah kadib ceebtii 6/1 ahayd ee kulankii Tottenhma.
Kooxda Newcastle ayaa arintaas ka faa’iidaystay si dar-dar lehna ku bilaabatay ciyaarta iyaga oo United ku qaadayay weeraro waali ah oo aan kala joogsi lahayn.
Arintaas ayaa keentay in ay daqiiqadii 2-aadba Newcastle Hesho goolka 1-aad kadib markii uu xiddiga Luke Shaw si khaldan kubada u dhex dhigay shabaqa kooxdiisa.
Kooxda Newcastle ayaa sii waday weerarda ay ku doonayso goolal waxana ay samayaysay fursado cajiib ah oo ay ku dheeraysan kareen natiijada ciyaarta.
Laakiin fursadahaas ayaan galin shabaqa kadib markii uu De Gea sameeyay badbaadino cajiib ah oo aad loola riyaaqay.
Man United ayaa daqiiqadii 20-aad dhalisay gool iyaga oo uu u dhaliyay Bruno Fernandes laakiin Goolkaas ayaa laga diidayy sabab la xidhiidha Offside.
Laakiin Daqiiqadii 23-aad ayay Man United heshay goolka saxda ah iyaga oo uu madax u dhaliyay xiddiga Harry Maguire kaas oo ciyaarta ka dhigay bar-baro 1/1 ah.
Waxa sidaas ku dhamaatay qaybtii hore ee ciyaarta oo ay Man United soo bandhigtay qaab ciyaareed aan fiicnayn laakiin natiijadu bar-baro tahay.
Qaybtii dambe ayay Man United gabi ahaan kulanka ku soo gashay si ka duwan sidii hore iyaga oo raadinayay goolal ay hogaanka ugu qabtaan ciyaarta.
Daqiiqadii 58-aad ayay Man United heshay rikoodhe kadib markii khalad lagu galay Marcus Rashford iyada oo VAR u qabatay rikoodhada.
Xiddiga Bruno Fernandes ayaa u Istaagay in uu laagto laakiin Goolhayaha Newcastle United ayaa si fiican u badbaadiyay rikoodhada.
Xilli ay ciyaartu u muuqatay sidaas ku dhamaanaysa ayay Man United dhanka kale u rogtay wax kadib markii uu xiddiga Bruno Fernandes daqiiqadii 86-aad dhaliyay goolka 2-aad ee kooxdiisa isaga oo ka dhigay 2/1.
Daqiiqadii 90-aad ayay Man United dhalisay goolka ay ciyaarta ku dishay kadib markii uu xiddiga Aaron Wan-Bissaka dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay ee Man United iyo goolkii 3-aad ee kooxdiisa.
Xiddiga Marcus Rashford ayaa daqiiqadii ugu dambaysay goolasha kooxdiisa soo xidhay kadib markii uu shabaqa dhex-dhigay kubada kana dhigay ciyaarta 4/1.
Waxa sidaas ku dhamaatay ciyaarta oo ay Man United gaadhay guusheedii 2-aad ee horyaalka premier League xilli ciyaareedkan.
Previous articleCiidamada NISA oo caawa xiray weriye Cabdullaahi Kulmiye kadib wareysigii ‘halista ahaa’
Next articleDayuurad Qaad siday oo todoba bilood ka dib ka soo degtay Muqdisho (Mala fasaxay)
Dalagyada Beeraha iyo Xikmada ku Dheehan
October 19, 2020 | Published by: yaska Sidaad la socotaan midhiha kasoo go’a dhirta nooc kasta wuxuu leeyahay waqti uu ku dhalo laguna goosto. Xiliyada kuleyka nooc ayaa soo go’a sidoo kelena qabowga noocyo kale ayaa soo go’a. Maxay tahay haddaba xikmada aan kala soo bixi karno halkaa? Xabxabku waqti xagaaga ee kuleyka ayuu soo go’aa waayo jidhka dadku wuxuu u baahan yihiin cabitaan haraadkuna waa badan yahay. Kawaran haddii waqtiga qabowga uu soo go’i lahaa xabxabku! Iminka waqti qabow ayaynu galney, waxaa soo go’day liin macaantii. Waxaa qobowga aad u kordha hargabka, jidhkuna wuxuu u baahan yahay Vitamin C si difaaciisu u kordho. Labadaas oo keliya hadeynu u fiirsano, waxaad ka fahmi kartaa in Illaahay xikmadiisa ay wax kastaa ku saleysan yihiin oo uu ugu talagalay in bani Aadmigu baahidiisa hadba ta jirta isugu beego. Midho kastaana ay soo go’ayaan marka jidhka iyo caafimaadka dadku u baahan yahay. Waxaynu marka odhan karnaa , saytuunka cun marka uu saytuunku soo go’o, marka muusku soo go’o muuska cun, marka shamaamku soo go’ona shamaam cun. Waayo waxa suuragal ah in jidhkaagu u baahan yahay waqtigaa cunida midhahaa. Dhinac kale haddii aynu ka eegno xikmada Illaahay u kala qeybiyey midhaha soo go’aya. Qofka beeraleyda ee midhaha beerta ka waran haddii ay hal mar soo wada go’i lahaayeen saytuunkii, xabxabkii, liintii iyo babaaygii! Waxa ku dhici lahayd masaariif la’aan sanadka intiisii kale maadama hal xili oo keliya ay usoo wada go’een. Wax u fiirso intaad meelahaas mareyso aayaad iyo cibro ayaa kaaga kordhaaya. WQ: Ahmed M. Elmi LA WADAAG ASXAABTAADA
Madaahibta iyo Soomaalida
October 19, 2020 | Published by: yaska Madaahinta kala duwan ee islaamka sunniga ahi uu u kala baxo Soomaalida waxa ay ku keeneen khalkhal iyo is fahan la’aan ka dhex dhalatay wadaaddada iyo goobaha lagu barto shareecada. Badiba wadaaddadu waxa ay wax kusoo barteen meelo kala duwan ha ugu badnaato waddamada Khaliijkuye sida Sucuudiga iyo Yemen. Dunida Muslimka marka soomaaliya laga tago waxa ay leeyihiin hal madhab oo qudha, kaasoo lagu dabaqo guud ahaan wixii shareecada la xidhiidha. Halka Soomaalida laba masjid oo isku xiga midna bisinka kor loo qaado midna hoos loo dhigo. Sidaas oo kale, laba machad oo suuqa ku wada yaalana ay kala dhigaan laba mad-hab oo kala duwan sida Shaafici iyo Xanafi. Labada wiil ee kala digtay labadaa mad-hab marka ay suuqa isugu yimaaddaan waxaad arki iyagoo ku murmaya hilib geelku waysada ayuu jabiyaa iyo ma jabiyo ama adoo salaad ku jira hadday gabadhi ku hor marto salaaddu way kaa bureysaa. Maxaa yeeley, midkoodna looma dhigin in labada imaam ay ku kala aragti iyo fahan duwan yihiin masalada ay ka doodayaan. Wixii ka horreeyay burburkii xukuumaddii uu Madaxwaynaha ka ahaa Jaalle Maxamed Siyaad Barre Soomaalidu kaliya waxa ay raaci jireen mad-habta Shaaficiyada. Wakhtigaa ka dib waxa Soomaalida kusoo qulqulay xagjirro diimeedyo badan oo sucuudiga gadhwadeenka yahay, iyadoo Soomaalida ay aafeeyeen abaaro, dagaallo iyo macalluul baahsan ayay iyaguna Masaajiddo innoo dhisayeen. Soomaalida badiba dadka barta shareecada waxa ay wax kusoo barteen waddamo kale sida Masar, Sucuudi iyo yemen. Markii ay dalka kusoo noqdaan saddexdaa qof ee saddexda waddan ka kala yimi in ay la yimaaddeen saddex mad-hab oo kala geddiisan. Arrinkaasna wuxuu keeney inay abuurmaan kooxo faro badan oo heerkeedu gaadhay inay masaajiddii kala yeesheen oo aanu midna kan kale masjikooda ku tukan. Dalalka Turkiga, Marooko iyo Malaysiya wasaaradda arrimaha diinta ayaa daabacda manhajka shareecada sidoo kale iyada soo qorta mawduucyada jimcayaasha laga jeediyo masaajidda, Soomaalida maahane waddan kasta oo Islaam ah hal hab qudha ayaa laga adeegsadaa si looga fogaado muran iyo is qabqabsi la xidhiidha arrimaha diinta. Dalka Marooko ardeyga doonaya inuu shareecada kasoo barto dal kale wuxuu ku khasban yahay inuu Masar yimaaddo maxaa yeeley Mah-hadbka laga adeegsado dalkiisa ayaa kan kale la mid ah. Muddo aan fogeyn Wasaarradda Arrimaha Diinta ee Soomaalilaaan ayaa waxa ay daabacday Manhajka Madarasadaha. Waxa isku qabqabsaday wadaaddada kala sita madaahibta kala duwan. Ilayn mid kasta waxa ku mudan kuu isagu bartaye. Si kastaba wakhtigan waa goortii Soomaalida lagu soo celin lahaa mad-habtii ay waligood haysteen. Tani waxa ay sahlaysaa in shareecadu noqoto mid fudud oo waxa laga tanaasulaya is barbardhigga madaahinta iyo waxa ay ku kala fahan duwan yihiin. Dhanka kale, dunida Muslimka cidda u gasha maxaadirooyinka iyo barnaamijtada kale ee diiniga ah waa dad aqoon baahsan u leh shareecada, halka innaga mid dhawr kitaab loo laqimay uu galay booskii dadkii ka mudnaa. Ugu dambeyn cid kasta oo baratay shareecada waxa looga fadhiyaa inay mideeyaan madaahibta lana go’aamiyo mid qudha oo guud ahaan lagu dabaqo goobaha waxbarashada iyo guud ahaan arrimaha shareecada. WQ: Mukhtar Ahmed LA WADAAG ASXAABTAADA